Wakiilka Kevin De Bruyne oo shaaca ka qaaday haddii ciyaaryahankan khadka dhexe uu ka tagayo Kooxda Manchester City – Gool FM
(Manchester) 09 Luulyo 2020. Wakiilka ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City, Kevin De Bruyne ayaa qubay wararka soo jeedinaya in 29-sano jirkaan laga yaabo inuu ka tago xagaagan garoonka Etihad.
Kaddib markii Man City ay lagu soo rogay ganaax labo sano ah oo ku aaddan kubada cagta Yurub, mustaqbalka qaar kamid ah xiddigahooda ugu qiimaha badan ayaa su’aal laga keenay.
De Bruyne waa mid ka mid ah xiddigahaas, kuwaasoo la la xiriirnayo inay isaga tagi doonaan garoonka Etihad todobaadyadii dhowaa, laakiin Wakiilka ciyaaryahanka reer Belgium ee Patrick De Koster ayaa xaqiijiyay in De Bruyne uu qarka u saaran yahay inuu ku sii nagaado magaalada Manchester, inkastoo ay jiraan xiiso meelo kale kaga yimid.
“Weli wuxuu heystaa qandaraas saddex sano ah oo uu ku leeyahay kooxda ugu sarreeya – Kevin wuxuu koox iyo magaalo halkaasoo uu dareemayo wanaag iyo mahadcelin,” De ayuu Koster u sheegay warsidaha Sporza.
“Dabcan, had iyo goor waxaa jira xiiso uga imaanaya kooxo kale, laakiin Kevin De Bruyne haatan kama fikirayo wax ku saabsan suuqa kala iibsiga”
“Had iyo jeer waxaa jira xiiso aan rasmi ahayn oo ku aaddan ciyaaryahannada ugu fiican oo ka ciyaara kubada cagta, haddii tani ay tahay KDB ama Lionel Messi ama Cristiano Ronaldo ama Antoine Griezmann.”
De Bruyne wuxuu ku riyaaqay xilli ciyaareedkiisii ugu wacnaa ee 2019-20 kooxda Pep Guardiola, waxaana loo diiwaan geliyey 13 gool iyo 21 caawin oo tartammada oo dhan ee Citizens.